Guddoomiyaha Aqalka Sare oo war-saxaafadeed soo saaray kaddib kulankii Guddiga Joogtada – Kalfadhi
Guddoomiyaha Aqalka Sare oo war-saxaafadeed soo saaray kaddib kulankii Guddiga Joogtada
Guddoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa galabta soo saaray war-saxaafadeed, kaddib shir uu Guddiga Joogtada ee Golaha Aqalka Sare ku yeeshay magaalada Mogadishu.
War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in fadhiyada Guud ee Golaha Aqalka Sare ay bilaabmi doonaan marka Guddoonka Labada Aqal ee Baarlamaanka ay ka wada-hadlaan sida ay Golayaasha Baarlamaanka uga howlgelayaan shuruucda iyo arrimaha hore-tebinta leh ee horyaalla Baarlamaanka, isla markaasna Guddiga Joogtada ah ee Aqalka Sare uu meel-mariyo ajendaha guud ee Aqalka.
Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare, oo gudanaya waajibaadka loo igmaday ayaa sheegay in uu magacaabayo guddi uu isagu hoggaaminayo, guddigaasi oo ka shaqeyn doona isu-keenista madaxda labada heer dowladeed iyo qabsoomidda shir looga tashan doono hannaanka lagu geli doonno Doorashooyinka Qaran ee 2020/201, si loo helo hab iyo hannaan raalli la isaga yahay oo doorashada lagu gallo.
War saxaafadeedka Guddiga Joogtada ee Aqalka Sare ayaa lagu sheegay Goluhu uu leeyahay kaalin dastuuri ah oo ku aadan isu keenista Madaxda Heer Federaal iyo Heer dowlad goboleedyo, si looga arrinsado loogana heshiiyo hannaan lagu meel marinayo xaalada kala guurka ah ee dalka.
Xildhibaan Xuseen Carab “Waligey ma arkin siyaasiyiin aan anniga ku jiro oo qabanaya arrimaha difaaca Dalka, Dadka iyo Diinta”